“Puntland xil ayaa ka saaran amaankeeda, cid kasta oo loo arko in ay wax u dhimaso amnigana sharciga ayaa la hor gaynayaa” Md. Gaashaan. – Radio Daljir
Nofeembar 23, 2009 12:00 b 0
Garowe, Nov 23 – Wasiiru dawlaha maamul wanaaga dawlada Puntland Maxamed Faarax Ciise \_’Gaashaan\_’ ayaa shir jaraa\_’id oo uu maanta ku qabtay madaxtooyada Puntland ku beenieyey war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska mudane Donald Payne, oo ka tirsan aqalka hoose ee Congress-ka Maraykanka, lagana soo doorto New Jersey.
Md. Gaashaan waxaa uu ugu horayn sheegay in Puntland ay xaq u leedahay difaacda iyo adkaynta amnigeeda, cid kasta oo loo arko in ay liddi ku tahay amnigana sharciga la hor gaynayo.
Md. Gaashaan waxaa uu beeniyey in aanay jirin maxaabiis loo dhiibay Ethiopia.
Waxaa uu tibaaxay in Puntland ay leedahay nidaam sharci ah oo dhawraya xuquuqda qofka, aanayna waxba ka jirin eedaymaha Md. Payne.
Waxaa uu intaas ku daray in ay jiraan dad u dhashay Somali Galbeed oo looga shakiyey amniga Puntland, hadana ku xiran jeelasha Puntland.
Maxsaabiista ayaa uu sheegay in maxkamada la horgayn doono sida sharcigu dhigayo, haddii lagu waayo wax dambi ahna la siidayn doono, haddii lagu helo dambiyada lagu soo oogayna ciqaabta ay mudan yihiin la marin doono.
Md. Gaashaan oo ka jawaabayey eedaymo nuxurkoodu ahaa in dawlada Puntland ay xirtay, deetana u gacan galisay Ethiopia dad la sheegay in ay ka tirsan yihiin jabhada ONLF oo ku sugnaa Puntland.
Hore ayaa maamulada Puntland & Somaliland loogu eedeeyey in ay u gacangaliyeen Ethiopia daraakiil iyo dagaalyahano ka tirsan jahbada xoraynta Somali Galbeed ee ONLF.
?M/weyne Faroole oo qaabilay wafti ka socda Midawga Europe.